गसिप – PathivaraOnline
Home > गसिप
महिलाले चर’मसुख प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ? जानी राखौ
admin July 7, 2020 July 7, 2020 गसिप, जीवनशैली, रोचक	0
एजेन्सी । लामो समयदेखि परिचितसँग आफ्नो यौ’न चाहना खुलस्त भन्न सकिने र आफ्नो आवश्यकता निर्धक्क व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छ। नयाँ पार्टनरसँगको सम्बन्ध कौतूहलमा त होला तर यौ’न उ’त्तेजनामा आउनै समय लाग्न सक्छ। त्यस्तो यौन’ सम्बन्धमा च’रमसुख प्राप्त होला भन्नेमा शंकै हुन्छ। परिचित र सहयोगी पार्टनरबीच यौ’न क्रि’यासँगै छिट्टै चर’मसुख प्राप्त हुन्छ। शारीरिक
श्रीमतिलाई खुशी पर्न नसकेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन श्रीमति खुशी पार्ने २० सुत्रहरू
admin July 2, 2020 July 2, 2020 गसिप, रोचक	0
एजेन्सी । नेपाली समाजमा थुप्रै कारणहरुले डि’भोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २० सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको दाम्पत्य जीवन सफल हुन सक्छ । ल हेर्नुस यस्ता छन् केहि टिप्सहरू... १ – श्रीमतीको मूडको
काठमाडौं, १७ असार । पछिल्लाे समय अन्तर्वातामा दिएकाे अभिव्यक्तिले कालाकारहरू एकाएक विवादित र ट्रोलकाे शिकार बनेपछि कलाकार दीपकराज गिरीले उनीहरुलाई अन्तर्वातादेखि होसियार रहन सुझाव दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कलाकारहरूलाई अन्तर्वातादेखि होसियार रहन सुझाव दिएका हुन् । यतिबेला कलाकार पूजा शर्मा ट्रोलको शिकार बनिरहेकी छन् । कारण- एक भिडियो
admin July 1, 2020 गसिप, जीवनशैली, भिडियो	0
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले करिअरका शुरुवाती दिनमा आफू दुर्व्य’वहा’रमा परेको खुला’सा गरेकी छिन् । उनले बारम्बा’र आफू दु’र्व्यवहा’रमा परेको बताएपछि यो मु’द्दा चर्चामा छ । साम्राज्ञीले फिल्मकर्मीको नाम नखु’लाई फिल्ममा काम गर्दा मेक’रले दु’र्व्यवहा’र गरेको बताएकी थिइन् । तर, साम्राज्ञीको भनाइपछि अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीले अ’सह’म’ति जनाउँदै ‘जुन थालमा खायो,
च’रम सन्तु’ष्टिका लागि युवतीहरूले शा’रिरिक सम्प’र्ककाे बेला के गर्ने के नगर्ने? जानिराख्नुहाेस्
admin June 30, 2020 गसिप, जीवनशैली, समाज	0
यौ’नप्रति हाम्रो विकृत सोंच छ । यौ’न भन्नसाथ त्यसलाई छा’डा भनेर नाक खुम्च्या’उने प्रवृत्तिले यस सम्बन्धमा खुला बहस हुन सकि रहेको छैन । नतिजा, यौ’नकुण्ठा जस्ता मनोविकारले धेरैलाई ग्र’स्त बनाइरहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा यौ’न सम्बन्धले खास महत्व र अर्थ राख्छ । यौ’न स’म्बन्ध बनाउनु भनेको केवल बंश निरन्तरताका लागि
admin June 30, 2020 June 30, 2020 गसिप, जीवनशैली, रोचक, समाज	0
पाेखरा – विवाह र्यथात प्रेम वा मित्रताका लागि महिला र पुरुषका फरक फरक धारणा हुने गर्दछन् । जसका कारणले उनीहरु एकअर्काका विषयमा जान्न र नजिक हुन अनेकौं प्रयत्न गर्छन् । तर एकले अर्कालाई बुझ्न नसक्दा दुबैको निकटतामा बा’धा उत्पन्न हुन्छ । यी १० कुरामा ध्यान दिन सके सम्बन्ध बलियो र दिगो
बाल्यकालमा केटाहरुसँग यस्तो खेल खेल्थिन् सनी लियोनी
admin June 27, 2020 गसिप, जीवनशैली, मनोरञ्जन	0
मुम्बई – आफ्नो हट लूकका कारण सनी लियोनी भारतमा निकै चर्चित छिन् । उनले कैयन् बलिउड फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् भने एक नेपाली फिल्मको गीतमा पनि आइटम डान्स गरेकी छिन् । उनले ‘बिग बोस’ जस्तो टिभी शो पनि काम गरिसकेकी छिन् । यतिमात्र होइन, उनको जीवनमा आधारित वेब सिरिज पनि बनिसकेको
अंकिताले सुशान्तलाइ बिर्सिन सकिनन्, अन्ततः सार्वजनिक गरेरै छोडे घरमा सम्हालेर राखेका यी कुराहरू! (तस्विर सहित)
admin June 24, 2020 June 24, 2020 अन्तराष्ट्रिय, गसिप, समाज	0
एजेन्सी । सुशान्तको निधनसँगै यतिबेला उनको जिन्दगीका विभिन्न पाटाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। जसमा उनी विहेको तयारीमा रहेको समाचार पनि यस अघि नै आइसैको छ । नोभेम्वरमा विहे गर्नेगरी उनको परिवारले तयारी गरिरहेको थियो। तर, उनले ५ महिना अघि नै संसारलाई अलविदा भने। उनको निधन पछि बलिउडमा बिभिन्न समाचार आइरहेका छन् जसले
अरेबियन महिलाहरु किन यति सुन्दर र का’मुक हुन्छन्? यस्तो छ रहस्य !
admin June 13, 2020 June 13, 2020 गसिप, जीवनशैली, रोचक	0
बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ । अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ । सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ ।
admin June 8, 2020 June 8, 2020 गसिप, जीवनशैली, बिचित्र, रोचक	0
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रको अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले धेरै कुरा संकेत गरिरहेको हुन्छ। शास्त्रमा कुन-कुन अंग ठूलो भएका महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन भन्ने विषयमा उल्लेख छ। शास्त्रअनुसार शरिरका यी अंग ठुला हुने महिला भाग्यमानि हुने र बिवाहका लागि राम्रो हुने मान्यता छ । तसर्थ पुरूषले यस्ता युवती